Nyocha Ọrịa Uche - Ọgụgụ ọgụgụ isi n'ịntanetị
Enweghi ike bụ otu n'ime ihe ọhụụ, netwọọk mara Psychic netwọ mana ekwesịrị m ịsị na ha dị egwu. Ndi nwe ha, ma obu ndi dibia ama ama ama ha bu DougC, nwe ha. Nweta Psychic na-enye ọtụtụ ụzọ iji ruo ndị ezigbo Psychic na-adụ ọdụ gụnyere ịgụ akwụkwọ igwefoto weebụ, ịgụ email, yana ụlọ nkata n'efu. A na-enyocha nlezianya ọ bụla nke Psychic Access weregoro iji hụ na ha bụ ezigbo onye ndụmọdụ ndụmọdụ. Naanị 5% ndị na-enyocha Psychic Access na-akwụ ụgwọ. Ha na-enyekwa 100% afọ ojuju ma ọ bụrụ na ị nweghị obi ụtọ na ịgụ akwụkwọ gị.
The Enweghi ike weebụsaịtị dị mfe iji, ma setịpụrụ ya nke ọma. Ọ bụghị dịka ọfụma dịka ụfọdụ ọrụ mmụọ ndị ọzọ, mana ọ na-arụ ọrụ ebube. Nwere ike ịzụta nkeji ozugbo na weebụsaịtị ahụ, dozie ọgụgụ isi ọgụgụ, ma kpọtụrụ nkwado ndị ahịa niile na-eji nbanye gị na weebụsaịtị. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mma na ọ dịkarịrị ngwa ngwa ma dị mfe iji na netwọkụ psychic niile m na-eji.
Enweghi ike nwere ezigbo ahia maka ndi ahia ohuru. Mgbe ịzụrụ ị ga-enweta 6 nkeji n'efu. Can nwere ike iji nkeji maka nkata, ekwentị ma ọ bụ kamera ọgụgụ isi na ọgụgụ isi ọ bụla dị n'ịntanetị. Oge ndị ọzọ dị mma karịchaa ma ọ bụrụ na ịnọ na mmefu ego ma ọ bụ ọ bụrụ na ị jụọ ọtụtụ mkpụmkpụ iji zaa ajụjụ.
Obi na-adị m ụtọ mgbe niile Enweghi ike'ngalaba ọrụ ndị ahịa. Ha na-enye nkwado ekwentị n'oge awa azụmahịa nkịtị, na ngwụsị izu. Nkwado email dị 24 × 7. Achọtara m mgbe niile ka ndị ahịa na-asọpụrụ ha, ma na-ebu ọnụ oge ole na ole m nwere iji ya.